Tattoo Rudder: ururinta naqshadaha iyo macnaha | Tattoo
Tattoo Rudder: macnaha iyo ururinta naqshadaha
ka Tattooga badda Waxay caan ku yihiin kuwa jecel adduunka farshaxanka jirka. Ha ahaato maraakiib, laydhadh, barroosinka ama badda hoosteeda, dhammaan noocyada kala duwan ee walxaha iyo walxaha la xidhiidha adduunka badda iyo badmaaxiinta laftoodu waxay fadhiistaan ​​boosaska ugu horreeya liistada naqshadaha ugu badan ee la xardhay Tusaale cad ayaa ah tattoo tattoos, shey si cad ula xiriira dadka naftooda u hura badda.
In kasta oo aysan u caan ahayn sida tattoos markabka ama barroosinnada, waa run in rudders ay kasbadaan kuwa raacsan kuwa jecel khad maqaarka. Qodobkaan waxaan ku fulineynaa dhameystir dib u soo celinta Tattoo shaati inaad kala tashan karto shaashadda inay jiraan dhowr cutub oo hoose. Naqshado iyo qaabab kala duwan oo leh hooseeyaha guud, macnihiisa iyo / ama astaan ​​ahaan.
Tattoo muxuu yahay micnaha? Marka ugu horeysa waa inaan helnaa hadiyado wax qabadka shaashadda. Waa aalad qaab-giraangir ah oo ku xeran dhabarka dambe ee doonta, iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqeeda, waxay doonta u jiheyn kartaa hal jiho ama mid kale. Waa cunsur fure u ah inuu dhaqaajin karo nooc kasta oo doon ah. Haddii kale doontu waxay noqon lahayd daaqa hirarka.
Mar haddii ay cadahay waxa roogagga doomaha loogu adeegsado, waxaan u sii amba qaadi karnaa falanqaynta iyo tilmaamidda macnahooda iyo sidoo kale calaamaddu. Mid ka mid ah macnayaasha inta badan lala xiriiriyo ruushka waa inay astaan ​​u yihiin jidka hore, maaddaama loo isticmaalay inay dejiyaan jidka. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa inay matalaan baahida loo qabo bedelida jihada nolosheena.
Dhinaca kale, oo aan muhiimad gaar ah lahayn, waxaan haysannaa xaqiiqda in roduhu yahay shay ay isticmaali karaan dadkaas doonaya inay ka tarjumaan inay heleen qaybtoodii ka wanaagsanayd. Lammaanaha la is guursado iyo / ama la guursado.
1 Noocyada Tattoos shaadhadhka
1.1 Kuwa ruushka iyo barroosinka
1.2 Kuwa yaryar
1.3 Raadiyaasha iyo kumbuyuutarrada
1.4 Kuwa ruushka leh magacyo
2 Sawirada Tattoos-ka Timon
Noocyada Tattoos shaadhadhka
Tattoos-ka shaashadda dhexdiisa waxaan mar walba naga heli doonaa noocyo kala duwan. Sababtoo ah markaan jecelnahay hal astaan ​​waxaan xiraneynaa si gaar ah, laakiin markaan u baahanahay inaan macno dheeri ah ku darno, waxaa la joogaa waqtigii la siin lahaa naqshado cusub. Ma rabtaa inaad ogaato waxa noocyada shaati-gacmeedyada shaashadda inta badan la dalbaday?
Kuwa ruushka iyo barroosinka
Xaaladdan oo kale, waxaan ka heli mid ka mid ah fikradaha waaweyn marka la eego tattoos. Sababtoo ah, waa a tattoo labalaab ah taasoo mararka qaar ay wadaagaan lamaanayaasha. Maaddaama dhinac ah, hoggaanku, sidaan horeyba u ognahay, uu yahay kan hoggaamiya jidka, yaqaana halka uu nolosha ku tegayo. Halka barroosinka ay lamid tahay taakuleynta iyo sidoo kale daacadnimada ama xasilloonida.
Maxaa ka dhigaya labada dhinac inay isu yimaadaan oo ay abuuraan waddo wadajir ah oo kalsoonida iyo hagidda laba qof ay fure u tahay. Laakiin waa run inaad adiguna yeelan karto labalaabkaas astaanta maqaarkaaga, adigoon waxba la wadaagin. Markaa waxay go’aamin doontaa mustaqbalkaaga adoo tilmaamaya inaad adigu tahay taageeradaada weyn iyo qofka qaadaya tillaabooyinka loo qaaday mustaqbal wanaagsan.
In kasta oo sida caadiga ah aan marwalba aragno sida tatuuraha shaashaduhu u midab badan yihiin, waad dooran kartaa ka soo horjeedka. Sababtoo ah a dhamaadka nooca minimalist, had iyo jeer waa ikhtiyaar weyn. Fikirka noocaas ah, waxaad ku xiran kartaa meelaha jirka sida curcurada ama dhagaha gadaashiisa. Xaaladdan oo kale, waxay badanaa leeyihiin khad madow, waa kuwo aad u fudud oo aan lahayn waxyaabo waaweyn. In kasta oo ay run tahay in qof waliba u dhammaystiri karo sida ugu wanaagsan ee uu jecel yahay.
Raadiyaasha iyo kumbuyuutarrada
Compasses waa mid ka mid ah sawiradaas aan ku aragnay maqaarka iyo qaabab kala duwan. Laga soo bilaabo midabada Old School ilaa maantadan la joogo iyo joomatari ama dhammaystirka ugu yar. Dhammaantood waxay ka dhigayaan inay sii ahaadaan mid kale oo ka mid ah astaamaha waaweyn ee qurxinta maqaarkayaga. Xaaladdan oo kale, waxay la mid tahay nasiib wanaag iyo ilaalinta dhammaan safarada. Nooc hage ah oo ku saabsan koorsadaas oo taagan marka aan aragno shaashadda. Shaki la’aan, cunsur kale oo xiriir dhow la leh kuwa matalaya adduunka badda.
Kuwa ruushka leh magacyo
Waxaa loo arki karaa inay sabab u tahay dariiqaaga nolosha ama jiho cusub ama koorso cusub. Laakiin magacyadaas ayaa had iyo jeer metelaya dadka ugu muhiimsan noloshaada. Qaar ka mid ah oo dhaafay oo ka tagay raadkooda ama taasi wali waxay sii wadaa inay maalin kasta sidaas sameeyaan. The magacyada astaamaha Had iyo jeer waa mid ka mid ah qaddiyadaha cajiibka ah ee aan sameyn karno, sidaa darteed, xaaladdan, waxay sidoo kale u adeegi doonaan hage mustaqbalkeenna.
Sawirada Pinterest, Adam Kuder, @ maria.mulata
Sawirada Tattoos-ka Timon
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos' » Tattoo Rudder: macnaha iyo ururinta naqshadaha
Tattoo-baaskiiladaha, oo kaliya kuwa ugu adag